मेवा खाँदा हुन्छन् यी फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
जुनसुकै मौसम होस्, स्वास्थ्यका लागि ध्यान दिनु निकै जरुरी हुन्छ । र, यसका लागि मेवा खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
आयुर्वेदिक नजरमा पनि मेवा अत्यन्त खास फल हो । मेवा खानाले शरीरको रगत शुद्ध हुने मात्र होइन, पेटदेखि लिएर छालासम्म राम्रो हुन्छ ।
मेवा भिटामिन युक्त हुन्छ र यसले एन्टी अक्सिडेन्ट तथा फाइबरको पनि काम गर्छ । रगत जम्नबाट रोक्ने मेवाले मुटुका अनेक रोगबाट पनि टाढा राख्न सहयोग गर्छ ।दैनिक खानामा मेवा खानाले बढ्दो तौल घट्न थाल्छ । जसलाई आफ्नो तौल घटाउन मन छ, उनीहरुले त झन् मेवा खानै पर्ने हुन्छ । यसमा हुने फाइबरले स्वास्थ्य पनि राख्छ ।
मेवाको गुलियोपना मधुमेह भएका बिरामीलाई पनि राम्रो हुन्छ, चिनी छोड्न पर्ने भएकाहरुलाई मेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनसक्छ । मेवा खाँदा भिटामिन ए पाइने भएकाले आँखाका लागि पनि यो फल अत्यन्त राम्रो मानिन्छ ।
तर, मेवा धेरै खानु भने हुँदैन । यसको अत्यधिक सेवन गर्दा मृर्गौलामा पत्थरी हुनसक्छ । त्यस्तै, मेवा बिहान ९ बजेसम्म खानुलाई राम्रो मानिन्छ । साँझ ६ बजेपछि चाहिँ मेवा नखानु नै राम्रो हुन्छ ।काठमाडौँ, जुनसुकै मौसम होस्, स्वास्थ्यका लागि ध्यान दिनु निकै जरुरी हुन्छ । र, यसका लागि मेवा खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
आयुर्वेदिक नजरमा पनि मेवा अत्यन्त खास फल हो । मेवा खानाले शरीरको रगत शुद्ध हुने मात्र होइन, पेटदेखि लिएर छालासम्म राम्रो हुन्छ ।मेवा भिटामिन युक्त हुन्छ र यसले एन्टी अक्सिडेन्ट तथा फाइबरको पनि काम गर्छ । रगत जम्नबाट रोक्ने मेवाले मुटुका अनेक रोगबाट पनि टाढा राख्न सहयोग गर्छ ।
दैनिक खानामा मेवा खानाले बढ्दो तौल घट्न थाल्छ । जसलाई आफ्नो तौल घटाउन मन छ, उनीहरुले त झन् मेवा खानै पर्ने हुन्छ । यसमा हुने फाइबरले स्वास्थ्य पनि राख्छ ।
तर, मेवा धेरै खानु भने हुँदैन । यसको अत्यधिक सेवन गर्दा मृर्गौलामा पत्थरी हुनसक्छ । त्यस्तै, मेवा बिहान ९ बजेसम्म खानुलाई राम्रो मानिन्छ । साँझ ६ बजेपछि चाहिँ मेवा नखानु नै राम्रो हुन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका यस्ता छन् फाइदा !!